Efitrano fitsaran’Andriamanitra (Dan. 7:13,14,21,22,26,27)
Inona no hitan'i Daniela manaraka tao amin'ny fahitany taorian'ireo bibidia anankiefatra sy ny tandroka kely? Nahita efitrano fitsarana tany an-danitra izy (Dan. 7:9,10, 13,14). Nisy seza fiandrianana napetraka tao amin'ilay efitrano, dia nipetraka Andriamanitra Ray. Nisy anjely arivoarivo nanompo Azy. Rehefa izay dia nipetraka koa ireo mpitsara, dia novelarin'Andriamanitra ny bokin'ny firaketana.
Hitanao ve fa mitranga aorian'ny fahataperan'ireo 1260 taona io fitsaran'Andriamanitra io? Hitantsika omaly fa ireo 1260 taona dia maneho ny fotoana nanaovan'ny tandroka kely ny asany, nanomboka tamin'ny taona 538 hatramin'ny 1798 TrK (jereo ny lesona Zoma). Koa taorian'ireo 1260 taona ny fitsaran'Andriamanitra, saingy mialoha ny hampiorenany ny fanjakany mandrakizay. Hitantsika intelo miantoana ao amin'ny fahitan'i Daniela ity fizotran-javatra manaraka ity :
Fotoan'ny tandroka kely (538-1798 TrK)
Fitsaran'Andriamanitra any an-danitra
Vakio izay voalaza momba ny fitsaran'Andriamanitra ao amin'ny Dan. 7:13,14, 21,22, 26,27. Aseho ao fa tombontsoan'ny vahoakan'Andriamanitra ny fitsarana. Amin'ny lafiny inona?
Manoritsoritra ohatra maro momba ny fitsaran'Andriamanitra tao amin'ny tabernakely sy tao an-tempoly ny TT, saingy tsy mitovy amin'izany ny fitsarana ao amin'ny Daniela. Fitsarana ny olona rehetra sy ny fahefana rehetra eto amin'izao tontolo izao izany. Koa tsy ny tandroka kely ihany no hotsarain'Andriamanitra, fa ny olo-masin'ny Avo Indrindra koa, izay hahazo ny fanjakana amin'ny farany.
Tsy manoritsoritra ilay fitsarana ny Dan. 7, ary tsy manome tsipiriany momba ny fiandohany sy ny fiafarany koa. Hitantsika kosa fa manomboka ny asany Andriamanitra noho ny famelezan'ilay tandroka kely an'Andriamanitra sy ny olony. Fitsarana mahenika izao tontolo izao io fitsaran'Andriamanitra io, ary hianarantsika ao amin'ny Dan. 8 sy 9 ny fiandohan'izany. Ho hitantsika koa fa voafaoka ao anatin'io asany io ny fanadiovana ny fitoerana masina any an-danitra ho afaka amin'ny fahotana. Ampianarin'ny Dan. 7 mazava tsara amintsika ary fa hisy fitsarana any an-danitra mialoha ny fiverenan'i Kristy. Ary ho tombontsoan'ny vahoakan'Andriamanitra io fitsarana io (Dan. 7:22).